Fiakarana tendrombohitra miaraka amin'i Hang Line, ilay vaovao avy amin'ny Lalao Yodo1 | Androidsis
Hang Line the Adventure, ilay vaovao avy amin'ny Lalao Yodo1 hahatratra ny tampony amin'ny farango
Ny lalao Yodo1 dia iray amin'ireo studio fianarana finday malaza indrindra. ankehitriny dia nandefa Hang Line the Adventure, lohateny ho an'ny Android misongadina amin'ny fahatongavana ho mpihanika tendrombohitra hahatratra ireo tampon-kavoana amin'ny faritaninao.
Ny lalao Yodo1 dia ekena amin'ny lalao toy ny Crossy Roads, ny akoho mahazatra mahazatra fa tsy maintsy miampita arabe izy mba hahatratra metatra sy metatra saika tsy misy fetra. Izy io koa dia manana lalao hafa toa ity vaovao ity izay mahafinaritra ny mianika tendrombohitra amin'ny karazany sy toetra rehetra.
1 Lalao ho an'ny mpihanika
2 Ny mpamonjy voina aza dia ao amin'ny Line Line
3 Mangatsiaka be, fa miala voly
Lalao ho an'ny mpihanika
Hang Line the Adventure dia anaram-boninahitra efa tanterahina tsara, miaraka amin'izany ankafizo amin'ny matau izay atsipin'ny mpihanika antsika hiakatra amin'ireo tampon'isa ireo. Ny andraikitsika dia ny manindry ny tendrony samihafa amin'ny lanezy izay hanipazan'ny mpihanika antsika ny farango. Ary noho izany dia hamakivaky ny rindrin'ny tendrombohitra izay hitarika antsika amin'ny hatsiaka sy ireo fotoan-tsarotra misy mpihanika rehetra isika.
Tamin'ny voalohany ny lalao voalohany ho tena mora, fa raha vantany vao manao tampon-tampon-tendrombohitra vitsivitsy isika, dia hahita olana toy ilay oram-panala izay vaky vetivety aorian'ny fanipazan'ny mpihanika azy ny farango. Ho hitantsika amin'izany fa tsy mora ny mianika ary isaky ny mila manome gadona bebe kokoa amin'ny lalao isika hitety faritra sasany amin'ireny tampon-tampon'ny havoana ireny.
Hang Line Adventure milalao koa amin'ny karazana somary be pitsiny, satria vitsy ny lalao tadidintsika tamin'ny fomba, na dia misy aza ny sasany toa an'i Rocky Climb manalavitra ny lalany izany. Raha ampitahaina amin'ny Hang Line amin'ny filazan'i Rocky, ny marina izay mihoatra azy noho ny estetika ary ho an'ireo ambaratonga voasokitra kokoa misy fahasarotana samihafa amin'ny fiakarana any an-tampony.
Ny mpamonjy voina aza dia ao amin'ny Line Line
ihany koa mila mamonjy ireo tafita velona isika izay efa niantsona tamin'ny iray amin'ireny faritra mampidi-doza ireny. Toy ny amin'ny tena fiainana, ny iraka ataontsika dia ny hanavotra azy ireo, na dia tsy misy fahasarotana aza satria tsy maintsy mitety azy ireo fotsiny isika. Na izany na tsy izany dia singa fanampiny tena ilaina izy io ary toa tsara amin'ny lalao an'io fomba io.
Ao amin'ny Hang Line izahay amin'ny tontolon'ny toerana mampidi-doza 5 misy haavo 50 mahery ary inona ireo maody fiakarana 4 tsy manam-petra. Misy helikoptera 5 hafa koa hitondra anao any an-tampon'ny tampony ary koa endri-tsoratra mihoatra ny 80 izay tsy maintsy ho hitantsika sy hovitaina.
Noho izany dia hanana zavatra betsaka hatao amin'ny lalao Yodo1 Games vaovao mikendry isika apetaho ny penina, ny solomaso ary sotroy ny fepetra ilaina rehetra hahafahanao mandrefy ireo tampon'isa izay manohitra anao manomboka izao. Misy koa gadget hafa toy ny jetpacks sy spheres, koa mamporisika anao izahay hahita izany ho anao.
Mangatsiaka be, fa miala voly
Ary bebe kokoa na latsaky ny Hang Line ity, lalao iray hahafalifaly sy an'izany milalao tsara indrindra amin'ny terminal misy fitaovana matanjaka. Izahay dia tsy hamerina intsony fa raha manana efijery AMOLED ianao dia azo antoka fa hankafy azy io bebe kokoa ianao, satria tsara ny sary. Ny hany zavatra tsy maintsy omena gadona amin'ny lalao handehanana manomboka amin'ny teboka iray mankany amin'ny iray hafa.
Amin'ny lafiny teknika dia tsara be izany. Mba hankafizana ireo ambaratonga namboarina miaraka amin'ny tendrombohitra somary tsara sy milamina. Ny tadiavinay dia ny hananany bebe kokoa singa mampidi-doza toy ny avalanc, na dia avy amin'ny kely nilalaovantsika aza dia efa azo tsapain-tanana fa hahita olana bebe kokoa isika. Ny famolavolana amin'ny ankapobeny dia somary tsara ary manana ny azy ny endri-tsoratra. Lalao hankafizana tsy misy isalasalana.
Hang Line dia tonga amin'ny Android mba hahafahanao manana fotoana mahafinaritra mihanika ary mahita fa be ny lalao amin'ny fitsambikinana avy any an-tendrombohitra miaraka amin'ny farango. Manana izany maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store ianao mba hahafahanao misintona azy izao. Tsy hanenenanao izany, manome toky anao izahay.
Fikitika sary mahafinaritra
Haavo vita tanana
Mora be aloha
Developer: Lalao Yodo1
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Hang Line the Adventure, ilay vaovao avy amin'ny Lalao Yodo1 hahatratra ny tampony amin'ny farango
Oppo Find X, finday iray hafa izay hahazo ColorOS 6.0 miorina amin'ny Android Pie tsy ho ela